Halluuwwan yookiin saxaatoo duubee qindeessuu
Halluuwwan Duubbee ykn Saxaatoo Duubbee Ibsuu
Halluu duubee qindeessuu yookiin saxaatoo akka duubeetti hammangaawwan man'eetiif LibreOffice Calc keessatti fayyadamuu dandeessa.
Halluu duubee wardii LibreOffice Calc dhaaf raawwachuu
Dhangii - Man'eelee (yookiin Man'eelee dhangeessi baafata haallee irraa) filadhu.
Fuula caancala Duubee irratti,halluu duubee filadhu.
Saxaatoo duubee maadheelee keessatti
Saagi - Fakkii - Faayilii irraa fili.
Saxaatoo filiitii Bani cuqaasi.
Saxaatoon man'ee ammaatti hidhameetu saagama. Saxaatoo akka barbaaddetti deemsisuu fi bal'isuu dandeessa. Baafata halqaraa kee keessatti kana duubee keessa kaa'uuf ajaja Qindeessi - Duubbeetti fayyadamuu dandeessa. Saxaatoo duubee keessa kaa'amee ture filachuuf, NaannessaaNaannessaa fayyadami.
Title is: Halluuwwan yookiin saxaatoo duubee qindeessuu